Janaraal Maxamed Xasan Cabdilaahi (Jidhif) waxa uu ahaa ninka kaliya ee abaan duulayaashii SNM ay abaalka weyn u hayaan Beelaha Gadabuursi..W/Q:-Mukhtar Osman. | WAJAALE NEWS
Janaraal Maxamed Xasan Cabdilaahi (Jidhif) waxa uu ahaa ninka kaliya ee abaan duulayaashii SNM ay abaalka weyn u hayaan Beelaha Gadabuursi..W/Q:-Mukhtar Osman.
November 29, 2021 - Written by Editor:
Mahadhooyinkii duruufihii dagaaladii sokeeyee ee dhaxmary beelaha Somaalida Waqooyi wada dega (Somaliland) sanadihii (1989 ill 1991). Sida aan wada ogsoonahay waxaa ka dhacay dalka kacdoon hubaysan oo ay hogaaminaysay Jabhadii SNM kaasi oo ujeedkiisu ahaa sidii looga hortagi lahaa xukunkana lagaga tuuri lahaa xukuumadii milatariga ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Bare.
Dagaal hubaysan oo dhexmaray xukuumadaa iyo SNM ayaa hadaba dhaliyay in dagaaladu ay ku faafaan bulsaha shicibka ah ee beelaha soomaaliland.
Siyaasada dawladii milatariga ahayd ee markaa wadanka ka talinaysay waxa ay ku salaysnay nidaamkii gumaysiga ee qaybi oo xukun taasi oo ahayd in cadaadis lasaaro beesha kaasoo horjeeda dawlada isla markaana la hubeeyo beelaha kale lagana horkeeno waxana dawladui syicmaashay shirqoolo dhagareedyo ay fulinayaan milatarigii dawladu oo ay inta ay xidhaan dharkii shicibka oo ay iska dhigaan jabhadii SNM hadan ay weerar ku qaadaan reeraha baadiyaha gaar ahaan deegaanad ay iska soo galaan beeluhu waxan ay ka dhacaan xoolaha dadka wixii ay arkaana waylaayaan. Kadib marka ay saraakiisha ama madaxdadawladu yimaadaan goobta uu ka dhacay weerarku waxay ugu qudbadeeyaan in ay dadkan laayeen Qudhmistu magacaasi oo ay u daeegsan jireen xoogagii kacdoonka ee SNM iyaga oo ku shaabadaynaya dambiyo aanay galin danta ay kalahaayeena waxa ay ahayd in sidii cadaawad iyo calaal xumo loogu qaadi lahaa SNM.
Arimahaasi waxa ay dhaliyeen in dagaalo dhexmaraan xoogaga SNM iyo maleeshiyo beeleedyo isku arkayay in ay iska difaacayaan . Waxa hadaba beelaha gobolka Awdal ay noqdeen laba qaybood kuwo olaadi udhaxayso .
Waxa xusid mudan in ay jireen dad tira yar oo aad u fahamsan siyaasada kicinta beelaha.
Waxa ka mid ahaa saraakiisha arintaa aadka ufahamsanaa ee kana dhiidhiyay Janeraal Jidhif oo abaanduulaha ciidamada xeebaha gobolaka Awdal ee SNM hogaaminayay. Waxa xusid mudan bishii may 1989 kii gabi ahaanba la xidhay xuduuda DJabouti iyo Somaliland sababtuna waxaay hayad markii xoogaga SNM ay qabsadeen magaalooyinka Lowyacado iyo Saylac . Waxana dawladii Somaliya ee milatarigu ku guuldaraysteen in ay SNM kaxoreeyaan halkaasi waxa dhacday in Safaradii Somaliya ee Djabouti kutaalay ay dadkii reer Borama oo ee dhalinyaradii markaa jidka laxidhay kuxaniban Djabouyi u yeertay oo ay kuwargalisay in lasiinayo baasabooro loona qaadidoono waxbarasho dibadeed kudhawaad 200 oo rag iyo dumar iskugu jirta ayay baabuur kusoo qaadeen waxana ay kusoo daadiyeen Geestiir ee udhaxaysa Ithopia Somaliland iyo Djabouti. Markaasi oo guud ahaan ay jabhada SNM qabsatay xeebaha Awdal. Waakan Cabdiraxman Abib Faraxoo kamid ahaa dadkaa ayaa ka waramaya. ‘Waxa safaarad Somaliya ay noo sheegeen in ay baasaabooro nasiinayaan oo ay deeqo waxbarasho dibada lanagaynayo hase yeeshee halkaan habeen madow ayaa gaadhi lanagusoo qaaday waxan u haysanay in aan ka dhoofayo madaarka balse waxaan kuwarhelnay anagoo xuduuda joogna waxana amar lanagu siiyay in aanu dagaal ka galno oo aanu SNM ka xorayno xeebta. Arintaasi oo aan u aragnay in ladoonayo iin meesha lanagu laayo habeenkaasi naf waa ka quusanay waayo manaqaano dhinac aanu u dhaqaaqno dagaalaa ka socda xeebtan aflibaax ilaah waaku galiyaa waana kaasaaraaye waxaan usoo galnay waxaan aaminsanayn hadii SNM ay qabato 200 dhalinyaro Gadabuursi ah in ay laynayso wacyigii markaa jiray awgeed . Markii ay ciidamadii SNM naqabteen waxalanoo geeyay taliyihii markaa jiida haystay eeSNM janaraal Jidhif waxaanu ka codasanay in kolay hadii lana laynayo hore lanoo laayo oo aanan lana silcin. Balse arintaa badalkeegu waxa na noola dhaqmay si karaamo mudo ayaa halkaasi lanagu hayay waana lana sooray xoolo ayaa lanoo qalay kadib waxa uu nagu daray koox askartiisa ka tirsan waxaanu ku amray in Djabouti siqarsoodiya lanoogaliyo maadaama hadii xagan Boorama iyo xeebta dagaalo beeleed ka socdaan oo aanan ka badbaadayn sababtoo ah hogaamiyahan wanaagsan oo kale fursada aanu marlabaad kula kulmayno ay yartahay waayo maleeshiyaadku waxay ahaayeen dad ku mamay dhiiga dadka.
Kadib waxaanu si nabad galyo ah ku galnay jabuuti anaga faraxsan, waxaanu u tagnay reerahayagii oo tacsi noo wada dhigay una haystay in lana wada laayey, xukuumadii wakhtigaasina ay idaacada bbcda ka sheegtay in dadkaasi ay laayeen jabhadii SNM ee ay u gacan galeen.